Taridia fibilaogina tsy mitonona anarana efa misy amin’ny teny Arabo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Mey 2019 3:42 GMT
Trohy ny endrika PDF
Manasongadina fomba maromaro hiarovana ny mari-panondroana ny torolalana mba hisorohana ny valifaty ary afaka mampihena betsaka ny mety hahazoana ny mari-panondroana ilay bilaogera na ny asa sorany antserasera amin'ny alalan'ny paika ara-teknika.
Ny “التدوين باسم مجهول مع ووردبرس و تور” dia efa azo trohana amin'ny endrika PDF. Mety mila mametraka Adobe Acrobat Reader maimaim-poana ianao raha hijery izany. Raha sendra manana olana amin'ny fijerena ny endrika PDF amin'ny aterineto ianao, dia andramo ity endrika HTML azo atao rohy sy mety tsara amin'ny bilaogy ity.
Trohy azafady ny toro-lalana ary ampio izahay hanaparitaka ity vaovao lehibe ity. Aza misalasala manampy anay amin'ny fandikana ny toro-lalana amin'ny fiteninanao.
Raha mila vaovao fanampiny, dia mifandraisa aminay ao amin'ny advocacy [ ao amin'ny ] globalvoicesonline [ teboka ] org